Sida Loo Xulo Khabiirka Suuqgeynta Emailka
8 Mabaadi'da Hagaya ee Kireynta Khabiirka Suuqgeynta Emailka
Jimco, Janaayo 29, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Scott Hardigree
Qaybta koowaad (Waxaad ubaahantahay Khabiir Suuqgeynta Emailka Haddii If) waxaan ka wada hadalnay goorta iyo sababta ay fikrad fiican u noqon karto in qandaraas lala galo khabiiro leh, u heellan, khibrad u leh iimaylka suuqgeynta. Hadda waxaan soo bandhigi doonaa mabaadi'da hagitaan ee la tixgelinayo ka hor inta aan la shaqaaleysiin an emaylka wakaaladda suuq geynta, La taliyaha suuqgeynta iimaylka ama maareeyaha suuqgeynta iimaylka guriga. Sababta
Inta badan shirkaduhu waxay xulashadooda ku saleeyaan shuruudo khaldan, oo sababa wadno xanuun, waxqabad la'aan, iyo qaddar aad u badan oo lumay wax soo saar iyo doolar.
Shan shay oo ay tahay inaadan sameyn
Ha xadidin raadintaada juquraafi ahaan. Haa, habka ugu faa'iidada badan ee lagu dhisi karo kalsoonida waa cilaaqaadka fool-ka-fool ah, laakiin taasi micnaheedu maahan in kalsoonida sidoo kale laguma dhisi karo xeebo ama qaaradaha kala duwan arrintaas. Maskaxda ku hay in waxa aad raadineyso ay yihiin taam sax ah. Xaddididda raadintaada bilowgii illaa aag juqraafiyeed qeexan waa mid aan loo baahnayn oo xadidan. Iyada oo miisaaniyaddaada suuqgeynta iyo ROI ay halis ku jiraan, saamiyada ayaa sidoo kale aad u sarreeya. Maalintan emaylka iyo WebEx, isgaarsiintu waa fududahay oo isla markiiba. Xaqiiqdii, markaan si shaqsi ah ula kulanno macaamiisheenna (haddii ay u baahdaan ku meelgaar ah ama adeegyo si buuxda loo maareeyo), kulamadu badanaa waa kuwo diiradda lagu saarayo oo wax ku ool ah maxaa yeelay waxaan horay u sii qorsheynay waqtiguna wuu kooban yahay.
Ha ku baarin xirfadleyda iyadoo lagu saleynayo cabirka. Haddii aad tahay shirkad yar, waa inaadan meesha ka saarin inaad la shaqeysid qori-kireysi oo keliya maxaa yeelay waxay bixiyaan adeegyo badan waxayna leeyihiin khibrad ka badan inta aad u baahan tahay; waa hubaal, inaadan u noqon doonin xarun faa'iido weyn iyaga laakiin waxaa laga yaabaa inay leeyihiin khibrad sax ah oo aad u baahan tahay.
Sidoo kale, macaamiisha waaweyn waa inaysan ka reebin wakaalado yar yar ama xirfadlayaal madax banaan tixgelinta. Dadka hibada leh ee madaxda ka ah dukaamada yaryar ayaa laga yaabaa inay ka khibrad badan yihiin xirfadle suuq-geyn suuqgeyn email ah ama shaqaale heer dhexe ah oo laguu qoondeyn doono hay'ad weyn oo adeeg buuxda leh. Waa fiiro gaar ah, khibrad, iyo fikrado muhiim ah.
Ha ka dhigin khibrad warshadeed mid qasab ah. Faa'iidooyinka suuqgeynta oo leh khibrad badan oo khibrad leh ayaa laga yaabaa inay ku xiran tahay koox-kooxeed-fikir. Ma jiro koox ama shaqsiyaad waligood ogaan doona sida aad uga ogtahay wax soosaarkaaga, markaa waa inaad u shaqaalaysiisaa waxay garanayaan: farshaxanka iyo sayniska suuqgeynta iimaylka.
Mid ka mid ah waxyaabaha aan ku jeclahay ka-mid ahaanshaha suuq-geynta emaylka ayaa ah is-weydaarsiga fikradaha laga helay ka shaqeynta dhammaan warshadaha kala duwan. Warshad kastaa waa mid gaar ah, laakiin dhammaantood waxay wadaagaan astaamo guud. Badanaa waxa aan baranno u adeegida macaamil hal warshad waxay kaliftaa fikrad cusub oo macmiil oo ah mid kale.
Ha weydiinin (ama madadaalin) shaqooyin mala awaal ah. Ololeyaal mala-awaal ah ama tijaabooyin ayaa caqabad ku ah ganacsiga hay'adda, isla sidaas ayaa loogu hayaa kuwa emayl-xuddun u ah. Ololaha gaarka ah waa sida steroids, waxay inta badan overinflate soo-bandhigayaasha? awoodaha. Laakiin sababta ugu weyn ee aadan u weydiisan shaqadan gaarka ah ayaa ah in rajooyinka ugu fiican – kuwa aad runti dooneysid - aysan sameyn doonin. Maaha qasab. Inta badan ee ay diyaar u yihiin inay ka boodaan adiga oo kuu sheegaya gunno mala awaal ah, ayaa inbadan oo shaki ah aad ka qabtaa. Haddii ay diyaar u yihiin inay bixiyaan shaqadooda waa inaan loo helin suuq aad u wanaagsan.
Ha ka fogaan su'aalaha ku saabsan miisaaniyaddaada. Ha u oggolaan in qofna kuu sheego in lacagta (ama miisaaniyadda) aysan hadleyn. Hay'ad kasta ama soo-saare kasta waxay leedahay miisaaniyadaha macmiil ee ugu yar, oo ku yimid khibrad loona saadaaliyay qayb ahaan dhaqaalaha iyo culeyska macmiil ee hadda jira. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay, in la sameeyo dib-u-eegis xog-ogaal ah, inaad xoogaa fikrad ka haysato waxa miisaaniyaddaadu tahay ama ay tahay inay noqoto. Waxaa laga yaabaa inaad la kulantay khibrad aan fiicneyn adoo ku dhawaaqaya miisaaniyadaada goor hore ama waxaad u maleyneysay inay aad u furan tahay (xusuusnow websaydhkii ugu horreeyay ee aad horumarisay?) Way dhacdaa. Laakiin sida caadiga ah, marka aad la hadlayso himilooyinka xiisaha leh, ku kac wadahadal furan markay tahay miisaaniyaddaada. Ugu dambeyntiina waxay kuu badbaadin doontaa waqti, tamar, iyo lacag.
Marka sidee u xulan kartaa lammaanaha suuqgeynta emailka?
Ha go'aamin waxaad u baahan tahay. Waxa ugu xun ee aad sameyn kartaa waa inaad shaqo qorto ka dibna u oggolaan maayaan inay qabtaan. Ma u baahan tahay qof hoggaanka u haya ama qof aad raacdo? Shirkad horumarin karta istiraatiijiyad ama khabiir ku ah fulinta? La taliye jecel inuu baashaalo ama mid ganacsi oo dhan ah? Shaqaale qaadanaya amarro ama qof caqabad ku noqon doona fikirkaaga?
Ha bilaabin wada hadal. U soo dir rajada emayl, ama wac iyaga. Wada qaad dhowr daqiiqo taleefanka waxaadna helaysaa dareen kimistariga iyo xiiseed isla markiiba. Weydii iyaga oo ku saabsan taariikhdooda, kuwa ay yihiin macaamiishooda hadda, waxa ay yihiin awooddooda asaasiga ah.
Ha ku martiqaadin inay dib u eegaan waxoogaa daraasad kiis ah. Maskaxda ku hay inaadan raadineynin inaad aragto haddii ay leeyihiin natiijooyin wanaagsan oo ay soo sheegaan (dhammaantood way sameyn doonaan) laakiin inaad fahanto fikirka ka dambeeya sida ay ku gaareen xallintooda. Waxaad wax ka baran doontaa hawshooda, maxay tahay, sida ay u shaqeyso, iyo sida ay ugu habboon tahay shirkaddaada iyo dhaqankaaga. Ma nidaam baa? Waxyo ku saleysan? Xogta ku socota?
Markaad hesho qaab wanaagsan, kala hadal sida ugu wanaagsan ee lagu hubin karo xiriir dheer oo guuleysta. Kaalay si aad uhesho heshiiska waxyaabaha aad kafilayso magdhawga iyo adeegyada. Ka dib qoriga qoryaha bilow oo u oggolow inay shaqeeyaan.
Tags: dhismaha kooxdaWordPress
Neceb Nacaybka Naqshadeynta Mashiinka Raadinta